Dunida oo la yaabban awoodda daroonnada uu Turkigu sameeyo (Arag inta meelood ee ay wacdaro ka dhigeen) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dunida oo la yaabban awoodda daroonnada uu Turkigu sameeyo (Arag inta meelood...
Dunida oo la yaabban awoodda daroonnada uu Turkigu sameeyo (Arag inta meelood ee ay wacdaro ka dhigeen)
(Ankara) 06 Juun 2020 – Min PKK, Bashaar Al Asad ilaa banka Libya, waxaa wacdaro ka dhigaya oo Turkigu intii kale uga tegey adeegsiga dayuuradaha is wada ee uu isagu farsameeyo ee daroonka.
Hoggaamiye kooxeedka Khalifa Xaftar oo ay gadaal ka taagan yihiin Imaaraadka, Sucuudiga, Masar, Ruushka iyo Faransiiska ayaa muddo gacanta ku hayey caasimadda 2-aad ee Benghazi, yeelkeede, bishii Abriil ee 2019-kii ayuu hawaystey inuu wada qabsado dalka Libya, isagoo u duuley dhanka Galbeedka Libya.
Si kastaba, Dowladda Libya ee GNA oo ay taageeraan Turkiga, Qadar iyo Talyaaniga ayaa weerar rogaal celis ah oo weli socda ku qaadday malliishiyaadka Xaftar.
Salaax Baquush oo ah falanqeeye siyaasadeed oo Libyan ah ayaa sheegay in maadaama ay juqraafi ahaan ka samaysan tahay dhul inta badan lama degaan ah oo oogo ahaan aan tigaad iyo geedo lahayn aanu qofna ku dhuuman karin haddii aanu haysanin difaac dhanka cirka ah.
”Taasi waa dhibkii nagu dhacayey ilaa aan ka helnay daroonnada Turkiga,” ayuu yiri Baquush.
Turkiga ayaa daroonnadan siiyey Dowladda GNA dhamaadkii 2019-kii, isagoo dadkii dhulka ka hagi lahaa tababarayey ilaa horraantii 2020-ka, waxayna markiiba ku weerareen saldhigyada Xaftar, jidadka sahayda, taasoo keentay inuu Xaftar kasoo boxo magaalooyin muhim ah oo ku yaalla inta u dhaxaysa Tripoli iyo xadka Tuniisiya.
Waxaa kale oo beri dhowayd laga qabsaday saldhig cireedka ciidan ee ugu wayn Galbeedka Libya oo dhan ee Al Watiya, taasoo keentay inuu Wasiir Gudeedka Libya Fatxi Cali Cabdisalaam uu yiraahdo; ”Turkigu wuxuu noo yimid xilli loo baahnaa.”
Dhanka kale, Suuriya ayay sidoo kale cashar ka dhigeen daroonnada Turkigu, gaar ahaan markii ay Bashaar Al Asad ku qaadeen Howlgalka Gaashaanka Guga (Operation Spring Shield), iyagoo ka aargudanayey duqayn looga diley 33 askari, 27-kii Febraayo ee sanadkan.
Sida ku cad xog ururinta Machadka Bariga Dhexe (Mideast Inst.), waxaa taliska Bashaar laga diley 3,000 oo askari, waxaana laga burburiyey 151 taangi, 8 helakabtar, 3 daroon, 3 miig oo ay ku jiraan 2 kuwa Ruushanku sameeyo ah ee 2 Sukhoi 24, 100 gaari oo ah kuwa gaashaaman oo noocyo badan leh, 8 hannaan oo daafaca cirka ah, 86 madaafiicda goobta iyo howsarro ah, qallaabiyaal rasaasta lagu qaado, hal talis ciidan iyo agabyo kale oo ciidan.
Turkiga oo daroonnadan u samaystay inuu iskaga fillaado dhanka diyaaradaha is wada, ayaa wuxuu maanta leeyahay 107 daroon, isagoo ka mid noqday dalalka haatan ugu khibradda badan dhanka adeegsigooda.
Wuxuu sameeyaa ilaa 3 nooc oo kala ah Tai Anka, Bayraktar TB2, iyo Bayraktay Akinci, kuwaasoo qabta howlo sirdoon iyo duqayn intaba, iyadoo uu Turkigu u dhoofiyo dalal ay ka mid yihiin Qatar, Ukraine iyo Libya.
Qorshaha isku fillaashaha ciidan ee Turkiga ayaa ku dhisan istaraatijiyad uu jeexay MW Recep Tayyip Erdoğan, kaasoo ku taamaya in 2023-ka oo ku beegan 100-guurada Jamhuuriyadda casriga ah ee Turkiga uu ku maamuuso horumarro badan oo uu Turkigu gaarey.
Previous articleAbiy Ahmed helps Somaliland put more facts on the ground
Next articleLaba MAANLAAWE oo halis ku ah MAQAAMKA & METELAADDA magaalada Muqdisho